आजको पीआर मान्छे संभावित ग्राहकहरु आकर्षित गर्न नयाँ "चिप्स" आविष्कार छ। त्यसैले, धेरै विज्ञापनहरु मा अक्सर पाल्तु जनावर हेर्न सक्छन्। आजको लेख पढेपछि तपाईं कुकुर को के नस्ल विज्ञापन देखा पर्न सिक्न छौँ "सम्राट्लाई।"
यो सेतो बिल्ली गर्ने हो?
बस कुकुर संसारमा, यो कुकुर पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier रूपमा जानिन्छ भन्छन्। "सम्राट्को" विज्ञापन देखि कुकुर को एक नस्ल को नाम बुझे भएको, तपाईं यी पशुहरू को मूल को इतिहास थाहा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले XIX सताब्दी को मध्य मा ब्रिटिश कुकुर ह्यान्डलरहरूको एक द्वारा नस्ल थिए। तिनीहरू बाहिरबाट यो नस्ल प्रतिनिधिको पुर्खाहरूको vestikov भयो रूपमा Cairn Terrier साधारण धेरै छन्।
को "सम्राट्लाई" विज्ञापन देखि कुकुर को नस्ल एक अपेक्षाकृत सानो आकार छ। वयस्क अधिकतम उचाइ मात्र 26-28 सेन्टिमिटर छ। आफ्नो बाह्य को सानो आकार बावजुद पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier एकदम बाक्लो काया छन्। यी पशुहरू को विशेषताहरु को एक disproportionate टाउको र शरीर हुन मानिन्छ।
pesika pyatisantimetrovym कठोर शरीर छोटो कपाल, बाक्लो र नरम undercoat फर बढी reminiscent ढाकिएको छ। मैले विज्ञापन "सम्राट्लाई" कुकुर को के नस्ल फरक ऊन विशेष सेतो छ आश्चर्य।
व्यवहार र चरित्र
यो रमाइलो, wary स्वभाव भएको एक धेरै सक्रिय जनावर हो। तिनीहरूले आत्म-सम्मान, तर पर्याप्त अनुकूल को एक धेरै विकसित अर्थमा छ। तिनीहरूले एक कोमल वा सोफा सामग्री आवश्यक छैन। पहिलो नजर मा "सम्राट्लाई" विज्ञापन को कुकुर नस्ल यो अनुभवहीन अवैतनिक र खेलौना जस्तो लाग्न सक्छ। वास्तवमा, कुकुर खेल धेरै मोबाइल र सक्रिय प्रेम हो। तिनीहरूलाई लागि, कुनै मौसम खराब छ। तसर्थ, पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier लामो चल्छ लागि सही साथी हुनेछ।
नस्ल प्रत्येक प्रतिनिधि सबै जनावरहरूको यो समूहमा निहित सुविधाहरू छ। तिनीहरूले स्वामित्व को एक धेरै विकसित अर्थमा, अन्य कुकुर तिर आक्रमण, चेतावनी अपरिचित र स्वतन्त्रता लागि इच्छा छ। यी सानो सेतो टेरियर्स ठूलो स्वरमा छाल प्रेम। सन्तुलित पशु विकास गर्न, यो शिक्षा र आफ्नो पाल्तु जनावर को समाजीकरण संलग्न एक प्रारम्भिक उमेर देखि आवश्यक छ।
पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier एकदम Jumpy छ र सजिलै आफ्नो अदालत इलाका छोड्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई को अगाडि साँच्चै impregnable बार, यी चतुर सानो कुकुर भाग्नु भने हुनेछ, एक टनेल बनाउन।
हेरविचार र मर्मत
विज्ञापन "सम्राट्लाई" मा के कुकुर को नस्ल रुचि भएकाहरूलाई, थाहा हुनुपर्छ बारेमा पन्ध्र वर्ष को एक औसत द्वारा यी पशुहरू को जीवन प्रत्याशा छ। यी कुकुर pancreatitis, संबंधी बृहदांत्रशोथ, cataracts र एलर्जी गर्न predisposed छन्। साथै, तिनीहरूले अक्सर जोइन्टहरूमा समस्या देखेको छन्। यो कुकुर को सबै बच्न उचित हेरविचार र उचित सन्तुलित आहार आवश्यक छ। प्राकृतिक खाद्य उपभोग कि जनावर को आहार को आधार अनाज, तरकारी, दुग्ध र मासु उत्पादन को सबै प्रकार हुनुपर्छ। यो पनि पाल्तु जनावर भिटामिन र खनिज पूरक दिन सिफारिस गरिएको छ।
केश लागि को रूप मा, वयस्क पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो Terrier लगभग फीका छैन। त्यसैले, यो पर्याप्त दुई पटक एक वर्ष trimmingovat छ। प्रत्येक महिना, यो विशेष शैंपू र क्रीम आफ्नो पाल्तु जनावर नुहाउने गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो पाल्तु जनावर बाल shreds मा झुन्डिएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र राम्ररी groomed उपस्थिति थियो।
साथै, यी हँसिलो र ऊर्जावान कुकुर लामो दैनिक चल्छ आवश्यक छ। तिनीहरूले नजिकैको पार्क मा खिलवाड मौका प्रशस्त हुनुपर्छ। नियमित पैदल vestika फर र छाला को अभाव मा यसको मूल चमक गुमाउन सक्छ। साथै, क्रमबद्घ शारीरिक गतिविधिहरु को कमी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा हुन सक्छ।
कसरी बोल्ने budgerigar सुझाव सिकाउन
दर्जा कुकुर खाना। कुकुर लागि सुक्खा खाना को दर्जा
Unpretentious जलजीवालय बिरुवाहरु: nayas, elodea, hornwort, cabomba
एक सबै भन्दा राम्रो छ, जो बिरालो फोहर फाल्न,
सुपरमार्केट, पसलहरूमा लागि व्यावसायिक उपकरण
प्रभावकारी विज्ञापन लेखन को लागि5नियमहरू
कसरी मेनिनजाइटिस र यो जाँदै गर्नुपर्छ कहिलेसम्म
विश्वसनीय प्रणाली - यो ब्रेक caliper
Oleaster र चाँदी
अपरेसन "Citadel": आफ्नै हतियार संग शत्रु को हार
को राउटरमा WPS के हो? WPS मोड राउटरमा।